Haweeneydii ciidammada Maraykanka ka tirsanayd ee jacayl awgii sirtii dalkeeda bixisay – Bulsho News
Haweeneydii ciidammada Maraykanka ka tirsanayd ee jacayl awgii sirtii dalkeeda...
Haweeneydii ciidammada Maraykanka ka tirsanayd ee jacayl awgii sirtii dalkeeda bixisay
Waa la cusbooneysiiyay 3 Daqiiqadood ka hor
Prosecutors said Mariam Thompson’s actions endangered the lives of US troops and sources in Iraq (file photo)
Khabiir Millateri oo u qaabbilsanayd dhanka luuqadda una dhalatay Maraykanka, lagu xukumay 23 sano kadib markii ay uu gudbisay macluumaad sir ah muwaadin ajnabi ah oo xidhiidh la leh kooxda Islaamiyiinta xagjirka ah ee Xisbullah.
Mariam Thompson, oo 62 jir ah ayaa qiratay in ay la wa`daagtay magacyada dadka Maraykanka u qaabilsan xog ogaalka Ciraaq nin ay xidhiidh jaceyl wadaageen.
Waxay sheegtay inay “quus ka joogtay” qof “inuu i jeclaado iyada oo da’daasa ” taasina ay kelliftay ee aysan u jeedin inay cid waxyeello u geysato.Dacwad oogeyaashu waxay sheegeen inay ogayd inay qatar galineyso ilaha iyo ciidamada Mareykanka.
“Xukunka Thompson wuxuu ka tarjumayaa halista ay leedahay ku xad gudubka kalsoonida dadka Mareykanka, ilaha bani’aadamka ee ay khatar gelisay iyo ciidamada ka shaqeynayay dhinaceeda ee asxaab iyo shaqowadaagba lahaa” ayuu yidhi John Demers, madaxa waaxda amniga qaranka , ayuu yiri Arbacadii.
Thompson oo ah muwaadin Mareykan ah oo ku dhalatay Lubnaan ayaa u shaqeysay dhanka turjumidda xarun militari oo Mareykan ah oo dibedda ah, halkaas oo lagu aaminay in aanay bixin sirtaugu sareysa ee amniga dowladda.
Intii lagu guda jiray 2017, waxay si jaceyl ah ugu lug yeelatay nin sheegay inuu xiriir la leeyahay Hezbollah iyo dowladda Lubnaan, dacwad oogeyaasha ayaa sidaas yidhi.
Xisbi siyaasadeed ee Shiicoiga Islaamiga ah iyo koox mintidiin ah, Hezbollah waxay awood weyn ku leedahay Lubnaan waxayna xiriir dhow la leedahay Iran.
Waqti ka dib, Thompson iyi ninkaas muddo badan ku wada xidhiidhayaan aaladaha maqalka iyo muuqaalka iyo dhanka afrriimaha.
Dacwad oogayaasha ayaa sheegay in howlgalada militariga Mareykanka ee Ciraaq ay ku kallifeen Thompson inay ninkan ku wareejiyo macluumaad xasaasi ah sanadkii 2020.
Bishii Diseembar 2019, ayay ahayd kolkii Thompson loo qoondeeyey xarun hawlgal gaar ah oo ku taal Ciraaq, Mareykanku wuxuu bilaabay duqeymo isdaba joog ah oo uu ku bartilmaameedsanayey Ciraaq oo lagu bartilmaameedsanayey Kataib Hezbollah, oo Mareykanku u aqoonsanaa argagixiso shisheeye.
Kadib, bishii Janaayo 2020, Mareykanku wuxuu qaaday duqeyn kale oo cirka ah taasoo sababtay geerida Qasem Soleimani, taliyihii militariga Iran ee ugu awooda badnaa waqtigaas.
Wax yar ka dib tan, jacaylkii Thompson ayaa faray iyada iyada si ay u hesho macluumaad ku saabsan cidda ka caawisay bartilmaameedka Mareykanka ee Soleimani.
Iyagoo ku shaqeynaya codsigan, waxay ku wareejisay daraasiin feylal ah oo ku saabsan ilaha sirdoonka, oo ay ka heshay nidaamyada kombiyuutarada militariga Mareykanka.
Thompson waxay siisay lammaanaheedii shirqoollo la waday aqoonsiyadooda ugu yaraan sideed ilo, 10 bartilmaameedyada Mareykanka ah, iyo xeelado, farsamooyin iyo habab badan oo la rabey in la hirgeliyo.
Thompson waxaa xidhay wakiilo ka socda FBI-da oo ku sugan saldhig Mareykan dibada ah bishii Febraayo 2020. Waxaa lagu eedeeyay inay jebisay sharciyada siraha dalkas bil kadib.
Maxkamad dhexdeeda, dacwad oogayaashu waxay ku doodeen xukun 30 sano ah oo in lagu xukumo Thompson.
Thompson was asked to divulge information after the air strike that killed Qasem Soleimani
Thompson waxay codsatay dabacsanaan, iyada oo maxkamada u sheegtay inaysan ku talo jirin inay wax yeesho askarta Mareykanka ama ay “waxyeelo u gaysato amnigeena ka qaran ahaan”.
Waxaan rabay uun inaan helo qof i jecel aniga oo gaboobay , jacaylkaas dartiisna waxaan quusay mawjado kale, oo waxaan ilaaway cidda aan ahaa muddo gaaban gudaheed “Thompson ayaa laga soo xigtay sida uu qoray wargeyska Washington Post.
Garsooraha degmada John Bates wuxuu ku xukuamay xukun gaaban oo ah 23 sano, isagoo sheegay inuu ka tarjumayo halista dambiyada, laakiin wuxuu sii raaciyey inay tahay shaqsi naxariis badan.
“Kiiskani waa inuu u noqdaa mid waano cad u ah dhammaan kuwa lagu aaminay macluumaadka difaaca qaranka ee ah in si keli keli ah loo bixiyo macluumaadka noocan oo kale ah dano shaqsiyadeed, ama kuwa kale, ma ahan naf hurnimo ama geesinimo; waa dambi,” ayuu yiri Alan Kohler Jr, oo ah kaaliyaha agaasimaha. oo ka tirsan Waaxda Sirdoonka FBI-da.